Stay Home Surprise for our Laundry's Customers!!!
Live Life Worries Free
Stay Home Surprise!!!
Stay Home ရမယ့်အချိန်မှာ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ Toast အဆန်းလေးတွေ စမ်းသပ်ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေ အတွက် နာမည်ကြီး Brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Deerma ရဲ့ Toaster လေး ၂ လုံးကို De Laundry Max ရဲ့ Piti Member တွေထဲကနေ မဲဖောက်ပြီး လက်ဆောင် ပေးမှာပါ...
ကျွန်တော်တို့ de Laundry Max Team က နေ မဲဖောက်ပေးမှာပါ....
ဒီလို Stay Home ရလို့ စိတ်ညစ်နေတုန်းကမှာ ပျော်ရအောင်စီစဉ်ပေးလို့ Post လေးကို ရှယ်ပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သဘောပါပဲလေ..... 😝😝 လက်ဆောင်ရသွားတဲ့ Customer တွေကို Page ကနေ ကြေညာပေးမှာမို့ Stay tuned ပါဗျို့.... ကိုဗစ် ကာလအတွင်း မှာ Customer တွေအတွက် Contact less Delivery ဖြစ်အောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဗျ...
ကျွန်တော်တို့ Service ကို ခေါ်ယူအသုံးပြုဖို့အတွက် Chat bot သို့မဟုတ် 09 95 44 71 777 ကို ဆက်သွယ်ခေါ်ယူလို့ရပါတယ်...
ဆိုင်အဝ မှာ Drop Off ချဖို့ဆိုရင်တော့ ဆိုင်လိပ်စာ No.14A, Ground Floor, Sanchaung Street (Near Baho Road), Sanchaung Street, Yangon. #Laundry_Service_Giveaway #Deerma_Toaster #Laundry_Service_in_Yangon #De_Laundry_Max
Laundry Member Gift
Laundry Service in Yangon
Stay Home ရင်း Surprise ရသွားတဲ့ သူတွေကတော့ ???
Rewards Announcement for Members
5% Discount for New Members!!!
09 95 44 71 777 | 09 95 44 72 777
No.14 A, Ground Floor, Sanchaung Street (near Baho Road), Sanchaung Tsp, Yangon, Myanmar.